Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ee McKnight, 2012-2014
Luuliyo 30, 2012
Sanadkii 2012, Guddiga Maareynta Hay'adda McKnight Foundation iyo shaqaalaha ayaa sameeyay habdhaqan istaraatiijiyadeed oo lagu hagayo shaqadayada muddada saddexda sano ee soo socota. Halkii ay ka ahayd qorshe "istaraatijiyadeed" oo laga yaabo inuu faahfaahin karo hawlo gaar ah oo la doonayo in la dabagalo wakhti cayiman, qaabkani wuxuu bixinayaa dareen ah sida aan u wajaheyno shaqadayada - ku salaysan jawaab celin firfircoon iyo hoggaan loo waafajiyo, balaarinta ballanqaadka muddada dheer dabacsanaan si looga faa'iidaysto fursadaha aan la filayn.
Qaab-dhismeedka istiraatijiyadeed wuxuu aqoonsanayaa guddiga iyo fahamka wadajirka ah ee shaqaalaha ee ku saabsan qiimayaasha, ujeeddada, iyo habka u hogaansami doona Hay'adda saddexda sano ee soo socota. Waxaa loola jeedaa bixinta isku xirnaanta guud ee ururka iyada oo loo sharxayo kala-duwanaanshaha ujeedooyinka iyo qaababka barnaamijka. Waxaan tixgelineynaa tilmaan-bixiyaha dhaqdhaqaaqa, waxaanuna ku talojirnaa inaan cusbooneysiinno sida loo baahan yahay si loo hubiyo in ay muhiim u tahay mowduucyada hadda jira.
Saaxiibadeena, lammaaneyaasha, iyo xubnaha bulshada ayaa door muhiim ah ka qaata Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyada. Marka laga soo tago yoolalka daahfurnaanta iyo xisaabtanka, waxaanu wadaageynaa Qaabdhaafkan sababtoo ah waxaan rumaysanahay in dhismaha fahanku uu naga caawinayo in aan wada shaqeynno si ka wanaagsan sidii hore. Waxay ku xirantahay wadashaqeyn maalinle ah oo leh boqolaal lamaanayaal muhiim ah oo ku yaalla Minnesota iyo adduunka oo dhan in Machadka "McKnight Foundation" uu daba socdo hadafkiisa iyo himiladiisa ujeeddooyinka muhiimka ah.
Hadafkayagu waa inaan ka caawinno dadka inay si buuxda u fahmaan habka McKnight ee qaabka danaha iyo aragtida. Fadlan nala soo socodsii waxa aad u maleyneyso.